Interior in color ultraviolet 2018: 3 imibono indlela ukuhlela - Indlela yokuphila 2022
Interior in color ultraviolet 2018: 3 imibono indlela ukuhlela
Imiphi imithunzi yokuhlanganisa
Ochwepheshe baqambe umthunzi oyinhloko ka-2018 umbala we-PANTONE 18-3838 Ultraviolet
Ezindaweni zangaphakathi, i-Ultra Violet ingaba yindawo enhle yokuzalela ukuzenza, njengoba ingengeza umbala, ukukhanya kwekamelo, yenze igumbi libe nobukhazikhazi futhi libe nesibindi.
Kuyathakazelisa ukuthi izithonjana zomculo ezifana neNkosana, uDavid Bowie kanye noJimi Hendrix balethe ama-ultraviolet tints ku-avant-garde yesiko le-Western pop njengophawu lokuvezwa komuntu siqu kanye nobuntu.
Umthunzi we-Ultraviolet ongaphakathi njengombala oyinhloko uzogcwalisa igumbi ngokujula okungavamile. Ngenxa yokunotha kwawo ekwakhiweni kwesikhala, lo mbala ubukeka ubuciko kakhulu.
Kodwa udinga ukuqapha ukukhanya, ngoba kuye ngokukhanya okufudumele nokubandayo, umthunzi ungashintsha ukubukeka kwawo.
Ochwepheshe batusa ukusebenzisa ukukhanya okufudumele ngezinhlanganisela.
I-violet hue ejulile efulethini ingasetshenziselwa ukudala ama-accents ombala amangalisayo. Ngalokhu, kungcono ukusebenzisa ukukhanya kwe-UV kufenisha nezinto zokuhlobisa.
Ukuze uthole isizinda esijwayelekile sekamelo, khetha i-pastel, imibala ekhanyayo, isibonelo, i-beige, grey noma i-lilac.
Ukukhanya kwe-Ultraviolet kuzodonsela ukunaka emininingwaneni yangaphakathi oyifunayo - umnyango, umbhede noma i-pouf.
I-Purple ihambisana kahle ne-shades eduze nesondo lombala - pink, obomvu noma oluhlaza okwesibhakabhaka. Kuhle futhi ukuhlanganisa i-ultraviolet namathoni aphikisana kakhulu esondweni lombala: ophuzi, oluhlaza okotshani, owolintshi., okungukuthi, ophuzi kanye nemithunzi ye-orange.
Kuyathakazelisa: ngesinye isikhathi, okunsomi kwakungokwemvelo kubameleli be-aristocracy. Izithunzi zayo zazitholakala kokubili ezingutsheni zamakhosi nangaphakathi kwezindlu zokulala zasebukhosini nasezindlini zokwamukela izivakashi. Ngaphezu kwalokho, i-amethyst onsomi yayisetshenziswa emasongweni amakhadinali njengophawu lwamandla nesimo.